MakeMKV u Mavericks, Beddelaan iyo Beddelaan DVD in kasta Video
> Resource > Mac > MakeMKV u Mavericks, Beddelaan DVD in kasta Video
"Waxaan la socda Master Gold ee Mountain Libaaxa u qiyaas ahaan hal toddobaad. Subler iyo gacan-jabis ganaax shaqada. Anigu ma isticmaali kartaa MakeMKV."
User -Wararka ka forum macrumors
MakeMKV ha kartaa in aad loogu badalo DVD, Blu-ray, cajalladaha AVCHD in MKV ee tayo sare leh. Si kastaba ha ahaatee, dad badan, sida nin ee kor ku xusan, ka caban codsiga MakeMKV waa in aynan Mountain Libaaxa. Waxa ay u muuqataa in dadka isticmaala MakeMKV leeyihiin in ay sugaan waqti dheer ka hor la sii daayo version socon. Waa hagaag, waxaan doonayaa in aan la wadaagno kale ah MakeMKV weyn u Mac (Mountain Libaaxa taageeray) si ay kaaga caawiyaan in aad guys badalo iyo badalo DVD in MKV la video tayada dhow asalka ah, oo ay ku jiraan wax kasta oo kale oo ah qaabab video oo caan ah.
Taasi Wondershare Video Converter Ultimate for Mac . Waxaa aad u saamaxaaya in ay diinta aad DVD cajalladaha oo macmal ah oo u iibsaday inay MKV leh tayo sare iyo ultrafast xawaaraha diinta. Waxa kale oo ay kuu ogolaanaysaa inaad badalo DVD in kasta oo qaab kale video (illaa 158) sida MP4, MOV, FLV, wmv, AVI, MPEG, VOB iwm Hadda uun raaci tilmaan faahfaahsan hoos ku qoran si loogu badalo iyo badalo DVD in MKV (Qaado MKV u tusaale ahaan).
1 Load files DVD in this kale MakeMKV u Mac (Mountain Libaaxa ka mid ah)
Marka aad u ordaan, oo kaliya ku dhufatey "Beddelaan" miiska si aan kugu badalo DVD iyo video files si kasta oo kale oo ah qaabab video. Ka dib markii in, isticmaal mid ka mid ka mid ah saddex siyaabood hoose si aad ku shuban DVD faylasha aad.
On menu ugu weyn, kaliya riix "File" ka dibna tag "DVD Load Files".
Gali DVD ah, u tag DVD drive si aad u jiidi icon file DVD in ay app this. Wixii ISO files iwm, oo aad si toos ah ayaa sidoo kale iyaga jiidi karaan barnaamijkan.
2 Dooro MKV (ama qaab kale video) sida qaab wax soo saarka
In liiska qaabka wax soo saarka ee kale MakeMKV ee Mountain Libaaxa, oo dhan video & audio qaabab loo jecel yahay, xataa qalabka halkan ku jira. Waxa keliya ma aha kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo DVD in MKV ee tayo sare leh, laakiin sidoo kale loogu badalo in qaab kasta oo kale sida MP4, MOV, M4V, AVI, wmv, MP3 iwm Taasi waa sababta app tani waa ka wanaagsan yahay MakeMKV.
Si aad u dooratid MKV, riix qaab icon hoose ee Murayaad this app ee, ka dibna tag "Video"> "MKV".
Fiiro gaar ah: app waxay bixisaa qalabka video tafatirka kala duwan, sida cut, dalagga, darsamaan, shaandheyn videos iwm ama ku darto video saamayn. Haddii aad rabto in aad wax ka bedel faylasha aad, riix "Edit" badhanka loo sameeyo. Ka dib markii in, ku eegaan saamaynta uu furmo suuqa Xiisaha Leh
3 Beddelaan DVD tan u dhiganta MakeMKV u Mac (Mountain Libaaxa ka mid ah)
Bilow si loogu badalo iyo badalo DVD in qaabka aad rabto in aad ku garaacaya ah "Beddelaan" button in interface hoose-midig. Next, ha app this si toos ah shaqada nasasho kuu. Marka bar horumar uu gaaro 100%, waxay ka dhigan tahay diinta ay ka badan tahay. Ka dib markii in, furo folder wax soo saarka si aad u ogaato faylasha wax soo saarka.
Talooyin dheeraad ah: Haddii doonayaa inaan badalo DVD loogu daawashada qalabka qaar ka mid ah sida iPhone, iPad, iwm, waxaad dooran kartaa model qalab u dhigma ee liiska qaabka wax soo saarka ee tallaabada 2, ka dibna lagu wareejiyo faylasha diinta qalabka ka dib tallaabada 3.